Portenta H7: ihe niile ị chọrọ ịma banyere ikpo okwu a | Akụrụngwa n'efu
Na Ndị Ahịa Eletrọniki Gosi na Las Vegas, e gosipụtara nnukwu ihe ọgbara ọhụrụ na teknụzụ. Arduino jikwa ohere egosi ụfọdụ ngwa agha zoro ezo ọ ga-etinye. A hụghị ya n'etiti ekwentị, smart TV, igwe eletriki, na ngwaọrụ akpaaka nke ụlọ IoT. Akpọrọ ihe ọhụụ Ike H7 ọ bụkwa ebe nlebara anya maka ndị hụrụ ebe ikpo okwu ama ama.
Ọ bụ eziokwu na Arduino lekwasịrị anya ruo ugbu a na ahịa akwụkwọ na ndị na-eme ya ma ọ bụ Mee N'onwe Gị hụrụ. Ọbụna efere ya akara Pro ka enwere ike iji ya na ebe ndị ahịa a maka ụfọdụ ọrụ. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na enwere ụfọdụ ọrụ aka ọrụ ejirila Arduino mee ntọala ...
Ma ugbu a, ha na-aga a bit n'ihu na Portenta H7 na e mere ya karịsịa na ọkachamara n'uche. Ndị ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịzụlite ngwaike ngwanrọ ngwa ngwa na ngwa ngwa na- ulo oru ngwa.
1 Gịnị bụ Portenta H7?
1.1 2 cores ke ukem
1.2 Ihe eserese
1.5 More ngwaike nkọwa
1.6 Datasheets na akwukwo ndi ozo
Gịnị bụ Portenta H7?
Agbanyeghị na ọ bụ ọnụahịa nwere ike ịdị oke ọnụ maka ndị na-eme ya na ngalaba agụmakwụkwọ, ewepụghị ndị a na ojiji ya. Ihe bụ ihe ọzọ, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ mmepe mbadamba na SBC ndị nwere ọnụahịa ndị yiri ya ma ọ bụ karịa.
Ee, àgwà si Portenta H7 mee ka osisi a dị anya site na ọdịnala Arduinos. Ma ọ bụ na mpaghara nke a na-agwa ya chọrọ ya, ebe ụfọdụ ibe MCU 8-bit agaghị ezu, ọbụghịkwa njedebe ụfọdụ nke bọọdụ ndị ọzọ nke ezinụlọ. Achọrọ nke obere microcontrollers na ụlọ ọrụ.
Akụkụ ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ bụ na ọ bụghị naanị na enwere ike ịhazi ya na asụsụ dị elu dị ka ndị a kpọtụrụ aha n'elu na ọrụ ndị dị adị, ọ na-akwado AI (ọgụgụ isi) na TensorFlow, ma na-ejigide opekata mpe na-adịghị ala ekele ya maka akụrụngwa kachasị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịgba ọsọ koodu maka Arduino n'akụkụ MicroPython ma debe kernels na nkwukọrịta n'etiti onwe ha.
Jiri ntụgharị Portenta Carrier Board gbanwee H7 ka ọ bụrụ a ENUC, nke ahụ bụ, minicomputer dị ike nke nwere ike ime ihe niile ị na-eme ugbu a na Arduino na ndị ọzọ, dị ka iji algorithms ọhụụ kọmputa maka usoro ụgbọ elu na-akpaghị aka, ma na-ejigide njikwa ala-ala nke moto, rudders, wdg.
Na mpempe, a efere pụrụ iche maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ dị ka a laabu ihe onwunwe, ikike iji ọhụụ kọmputa, PLCs, ụlọ ọrụ dị njikere njirimara ihu igwe, njikwa robot, ngwa ngwa dị oke egwu, ọsọ mmalite mmalite (ms).
2 cores ke ukem
Ihe nhazi nke Potenta H7 bu uzo abuo IGIHE site na STMicroelectronics. Mpempe akwụkwọ French sitere na ezinụlọ STM-32 nke na-achịkọta microcontrollers dabere na AR-32-bit ARM. N'okwu a, akara nhazi ahọpụtara bụ Cortex M7 na-agba ọsọ na 480Mhz na Cortex M4 na-agba ọsọ na 240Mhz.
Ukpu abuo ndia bu weputara site na usoro akpọrọ Usoro Usoro Igwe na-enye ohere ka enweghị ọrụ na-akpọ na nhazi ọzọ. Ndị nhazi abụọ ahụ na-ekerịta akụkụ ma nwee ike ịgba ọsọ:
Arduino IDE eserese dị nnọọ ka bọọdụ Arduino ọzọ ga-eme. Ọ ga-eme ya na ogwe aka Mbed OS. Nke a bụ sistemụ agbakwunyere maka ikpo okwu a nke a na-eji na ngwaọrụ IoT na Cortex-M.
I nwekwara ike ịgba ọsọ asụsụ ala maka Mbed.
Ọzọ nke atụmatụ esịne ke Portenta H7, na otu onye nke kasị ijuanya dị ka nke ọma, bụ ekwe omume jikọọ bọọdụ na nyocha nke mpụga, dị ka a ga-asị na ọ bụ kọmputa. N'ụzọ nke a, ọ na - enye gị ohere ịmepụta kọmpụta gị raara onwe ya nye nke nwere njirimara ọrụ ya.
Na nke ahụ ga-ekwe omume a GPU on-mgbawa n'ime STM32H747. Na nke a, ọ bụ Chrom-ART Accelertor, nwere koodu nke ya na ndozi maka JPEG.
Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụdo gị na mmemme na iji maka ọrụ gị. Portenta H7 nwere 80 pines njikọ njupụta dị elu na bọọdụ. Nke a na - eme ka bọọdụ ahụ nwee ike ọfụma ma nwee ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmelite. Ha ga-ekwekọ na ọtụtụ nke ihe ntanetị hụrụ na blog a na ndị ọzọ.
Portenta H7 motherboard gụnyekwara njikọta WiFi na Bluetooth, inwe ike ijikọ ya na netwọkụ iji jikọọ aka na ihe ndị ọzọ. Yabụ, ịchọghị modulu ndị ọzọ dịka ogwe osisi Arduino ndị ọzọ. N'ezie, ọ na-akwado ihu ndị ọzọ dịka UART, SPI, Ethernet, I2C, njikọta ọtụtụ site na USB-C (Ngosiputa Ngosipụta maka nyocha, nnyefe ike maka ngwaọrụ OTG, ...), wdg.
More ngwaike nkọwa
Portenta H7 (nke aha koodu H7-15EUNWAD mara) abịa na ndị na-esonụ:
8MB SDRAM ebe nchekwa
16MB NOR flash ebe nchekwa
NXP SE050C2 Crypto chip, maka nchekwa
Murata 1DX Module maka WiFi / Bluetooth
Poolu na mpụga
Njikọ ngosi DisplayPort na USB-C
Inye ike na 5V PSU (sekit na-arụ ọrụ na 3.3v)
Nkwado maka batrị Li-Po Single Cell, 3.7V, 700mAh opekempe
Ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti -40 na 85ºC
MKR isi maka ọta mmepụta ihe
Igwefoto igwefoto 8-bit ruo 80 Mhz
Ike ADC / DAC
Ike ike na ọnọdụ nkwụnye 2.95 (A (Ndabere SRAM Gbanyụọ, RTC / LSE ON)
Datasheets na akwukwo ndi ozo
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Portenta H7 na ya mmiri, ị nwere ike ibudata ndị a akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ ntanetị nyere:
STM32H7 isi mgbawa
NXP SE050 Nchebe Mmewere
Murata 1DX njikọta modul
Ebumnobi nke Portenta H7
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Portenta H7: ihe niile ị chọrọ ịma banyere nke a n'elu ikpo okwu